TTSweet: August 2009
Posted by T T Sweet at 3:00 PM 10 comments: Links to this post
Posted by T T Sweet at 2:15 AM9comments: Links to this post
ချစ်သူငယ်ချင်း မသက်ဝေမှ tag လာလို့ ရေးပါတယ်။
ဒီနေ့ တစ်ပတ်လုံးပင်ပန်းလွန်းလို့ ဒီနေ့တော့ခွင့်ယူထားပါတယ်။ ပို့စ်တွေတင်ရင်ကောင်းမလား၊ သမီးလေးနဲ့အတူဆော့ရင်ကောင်းမလား။
ဘလော့မှာဆို သူများtag ထားတာတွေ မရေးဖြစ်တော့ အားနာလို့ ရေးအုံးမှပါလေ။ သူငယ်ချင်းတွေဆီ ဖုန်းမခေါ်ဖြစ်တာလဲ အပြစ်တစ်ခုလို။
ဒီတစ်ပတ်လုံးကောင်း၊ အလုပ်ပင်ပန်းလို့ တကိုယ်လုံး ညောင်းကိုက်နေတာမှလွဲလို့။
အွန်လိုင်းတက်ကတည်းက စာအုပ်တွေ သိပ်မဖတ်ဖြစ်တော့တာ ၀န်ခံပါတယ်။
သမီးလေးကို ပျော်ရွှင်စေမဲ့ နေရာတွေ။ ပြီးခဲ့တဲ့ အပတ်က မလက်ကာ၊ Botanic garden
ဖိုရမ်ထဲမှာ သူများမေးထားတဲ့ ဟင်းချက်နည်း နည်းနည်းပါးပါး။ စာရေးရမှာ ပျင်းနေပြီး လိုက်ဖတ်နေရတာကိုပဲ သဘောတွေ့နေပါတယ်။
ခုခေတ်ခလေးတွေ ပြန်ဆိုထားတဲ့ ရေဒီယိုသီချင်းလေးတွေ။ ရေဘက်ကာဝင်းတို့ ဘာတို့ပေါ့။
ကဗျာသိပ်ဝါသနာမပါတာ ၀န်ခံပါတယ်. သမီးနဲ့အတူ ခလေးကဗျာလေးတွေပဲ ရွတ်မိတယ် ... ဟီဟိ။ ကဗျာသမားများ စိတ်မဆိုးကြပါကုန်။
စိတ်မအား လူမနား အခြေအနေက လွတ်ချင်တယ်... (ဒါက မသက်ဝေဆီက ထပ်တူတပ်မျှကူးချထားတာ ... ထပ်တူပါပဲ သူငယ်ချင်း ... ခုတလော ရုံးမှာ အလုပ်ရှုပ်လွန်းလို့)
နဲနဲ ၀ နေတယ်ထင်လို့ diet လုပ်နေပါတယ်... နေ့လည်စာ အသီးအနှံပဲစားဖြစ်ပါတယ်...ညစာတော့ အိမ်ချက်ဟင်းဆိုတော့ စားမိတယ် ... စားမိပါတယ်။
အမိမြေမှ သားကောင်းများ ... အစိမ်းဝတ်တွေမဆိုလိုပါ။ စားဝတ်နေရေးအတွက် ရုန်းကန်လှုတ်ရှား၊ ကျပ်တည်းဆင်းရဲနေသူ လူထုအား ဂုဏ်ပြုခေါ်ဆိုပါသည်။
ကျန်ခဲ့တဲ့ မိသားစု၊ အဖေ၊အမေ၊ အဖွား၊ အကိုတွေ...
stress ကင်းပြီး ကိုယ်စိတ်ပါရာ၊ ၀ါသနာပါရာလေးတွေအတွက်ပါ အချိန်ပေးနိူင်တဲ့ ဘ၀။ သမီးအတွက် အချိန်တွေ အများကြီး ပေးနိူင်တဲ့ မေမေတစ်ယောက်အဖြစ်
နေ့စဉ် ဘလော့လေးကို ပို့စ်လေးတွေနဲ့ ဝေဆာအောင် စာရေးနိူင်သူတွေ။
ကိုယ့်အိမ်ကလူ လကုန်မှာ နိူင်ငံခြားတိုင်းပြည်မှာ အလုပ်ရှာရင်း အသိုက်ပြောင်းဖို့။ အစစ အဆင်ပြေစေချင်တယ်။
အာဏာကို အလွဲသုံးစားလုပ် ... အပေါ်ဖား အောက်ဖိတွေ။
အလုပ်တွေများပြီး stress တွေများတဲ့ ဘ၀ကို။
စိတ်တွေကို လျော့ဖို့။ စိတ်အေးအေးနေတတ်ဖို့။
အားလုံးအဆင်ပြေ ပျော်ရွှင်ကြပါစေ။ သမီးလေး လက်နာနေတာ အမြန်ပျောက်ပါစေ။
I amabit lazy guy.
Posted by T T Sweet at 10:01 AM5comments: Links to this post